Iinkonzo zeZikolo | Isiseko soMvuzo - Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Iinkonzo ezikolweni
Njengokuphayona ngesondo kunye nobudlelwane kwimfundo yesisa, sinikezela ngeenkonzo ezisemgangathweni ezikolweni. Sisebenzisa ubungqina bamva nje malunga nefuthe lephonografi ebantwaneni nakubantu abadala abancinci ukuhambisa izifundo ezisebenzisanayo zabafundi ukusuka kwiminyaka ye-11 ukuya kwi-18 iminyaka njengenxalenye yekharityhulamu yePSHE / SRE. Sibonelela ngezixhobo ezifanelekileyo ngokweminyaka ukulungiselela abafundi ukubanceda bahambe kwindawo ekwi-intanethi namhlanje. Ngokwazi impilo, ezomthetho kunye nolwalamano nefuthe lokuzinkcinkca kwi-intanethi, banokuthintela ukubanjiswa yiyo okanye bafune uncedo ukuba bayakwenza oko. Sikwaxhobisa abazali ukuba bathethe nabantwana babo ekhaya ngesi sihloko sinzima. Udliwanondlebe lwethu olwrekhodwe ziingcali kwezonyango nakwezomthetho kunye nokufumana kwakhona abasebenzisi zenza ukuba izifundo zenziwe ngokwenyani. Sisebenzisa izixhobo zokubhala kunye nenkxaso yabazali nootitshala. Ezi zixhobo zikwalungele nezikolo zokholo.
"UMariya wanikela intetho ebalaseleyo kubafana bethu ngokubhekiselele kwimibala engamanyala: yayinokulinganisela, engekho isigwebo kwaye ikwazisa kakhulu, inceda ekuxhobisa abafundi bethu ngolwazi abayidingayo ukuze benze ukhetho olucacileyo ebomini babo."
UStefan J. Hargreaves, uMphathi oyiNtloko yeSinina, iSobridge School, iTorbridge
"Ndiyakholwa ukuba abafundi bethu badinga indawo ekhuselekileyo apho bangaxoxa ngokukhululekileyo imiba enxulumene nesondo, ubudlelwane kunye nokufikeleleka koonografi kwi-intanethi kwixesha ledijithali."
ULiz Langley, iNtloko yoMntu WezeMfundo kunye neNtlalo, i-Dollar Academy
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi inokuba neempembelelo ezahlukeneyo kwimpilo, indlela yokuziphatha kunye nokufikelela kubantwana namhlanje. Unokwazi kwakhona ukuba umthetho wase-UK wokuqinisekisa ubudala kwi-Digital Economy Act 2017 kulindeleke ukuba uqalise ukusebenza nge-2019. Urhulumente khange abhengeze owona mhla. Iziphumo ziya kuba zenza kube nzima ngakumbi ukuba abantwana bafumane ezi zixhobo. Iingcali zixhalabile ukuba kwabanye abantwana abasele bengabasebenzisi abanzima kunokubakho iimpembelelo zempilo yengqondo. Ukuba ucinga ukuba kukho umngcipheko woku esikolweni sakho, mhlawumbi sinokukunceda.
Sithandana ngesini kunye nobudlelwane bezemfundo ngokusebenzisa i-neuroscience yenzululwazi nophando lwezesayensi yoluntu kunye nemigaqo-siseko yezemfundiso. Iiworkshops zethu zootitshala zivunywe yiKholeji yaseRoyal of General Practitioners. Sinikela iiseshoni zonyaka ngokupheleleyo kwiingozi zoononografi zisetyenziselwa abafundi ukusuka kwiminyaka eyi-12 ukuya kwi-18 iminyaka njengenxalenye yekharityhulam ye-PSHE okanye i-Curriculum Citizenship. Indlela yethu yokubonelela ngobungqina kubantwana ukuba bancede basebenzise izakhono zokucinga eziphambili kwaye bahlakulele isigwebo sabo. Sixhobisa nabazali ukuba bakwazi ukusebenzisana ngokufanelekileyo nabantwana babo ekhaya kunye nokubhalisa izibonelelo ezixhamlayo. Sivame ukumenywa yi-BBC TV kunye neRadio kunye ne-national press ukuba sibeke ingxelo malunga nale ngongoma.
I-Foundation Benefits inikeza izifundo nezifundo ezahlukeneyo. Akukho bonografi iboniswa. Iingxoxo zilungele ukuhambelana neqela leminyaka. Nceda ubone iinkcukacha ngezantsi. Ukuqaliswa kwezicwangciso zezifundo ootitshala abazisebenzisayo kuya kubhengezwa kwiiveki ezizayo.
Abasasazi beenkonzo zethu ezikolweni nguNks. Mary Sharpe, igqwetha, uGqirha Darryl Mead kunye noNks. Unksz Sharpe unemvelaphi kwezengqondo nakwimithetho yokusebenza njengelungu leFakhalthi yabameli eScotland naseBrussels. Uchithe iminyaka esibhozo njengomhlohli ophumelele kwiDyunivesithi yaseCambridge eqhuba iindibano zocweyo ezisekwe kubungqina ekugcineni ukusebenza okuphezulu. UGqirha Mead yingcali kwezobuchwephesha bolwazi kwaye uqeqeshwe njengomnye weeNtshatsheli zikaRhulumente waseScotland. Kude kube ngu-2015, wayelisekela-ntloko leLayibrari yeSizwe yaseScotland. Ukwangutitshala oqeqeshiweyo. USuzi Brown ngutitshala onamava eminyaka eyi-7 yokufundisa i-PSHE kwizikolo zesiNgesi kwaye wayenguMncedisi weNdlu kwiBhishophu yaseStortford College, eHertfordshire kangangeminyaka emi-5. Singamalungu eskimu sikaRhulumente waseScotland sokuKhusela amaQela aKhuselekileyo kwaye sigqibe uqeqesho loKhuseleko loMntwana.
Ukuba ungathanda ukuqwalasela iinkonzo zethu kwisikolo sakho, nceda uqhagamshelane noMary Sharpe, kwi mary@rewardfoundation.org okanye ngomnxeba kule nombolo: 07717 437 727.
Sisebenza kunye namaqela angamalungu angatshatanga kunye ahlukeneyo ngokwesini. Izinto eziphathekayo zizinto ezihlukeneyo. Zonke iintetho kunye nezifundo zingaba nemizuzu ye-40-60 elide ukulingana nexesha lakho lokushiya ixesha lokushiya imibuzo.
Ngokubanzi Isingeniso kwimpembelelo ye-Internet yezoonografi:
ingozi kwimpilo yengqondo kunye yengqondo; ukufikelela kwimfundo, ubugebengu, ubudlelwane
udliwano-ndlebe nevidiyo kunye nabashushu abanobugqwetha abaye bafumana
indlela yokwakha ukuzinza kunye nalapho unokufumana uncedo
Ubulili kunye neMedia:
uyazi izizathu ezenziwa emva kweentengiso, ifilimu kunye noonografi
uqaphele iimiphumo ezibangelwa ukuxhatshazwa koonografi
ukuqonda zonke izinto zinikwe ixabiso-xabiso lomntu lingaphezulu kwayo yonke into
ukuqonda izinto zesondo ngenxa yokuba abantu bayabaluleka
Ukwabelana ngesondo kunye nolwazi:
ukuhlolisisa oko kuthetha ukuthatha izilwanyana (kuquka ulwazi malunga nophuhliso lwezesondo)
uyayazi kwaye uqonde iibhile zomzimba ezahlukeneyo ezisetyenziswayo
Ukuqonda umntu ngamnye uyingqayizivele kwaye uyabodwa
uqaphele ukuba ubulili kunye neelayile zesenzo okanye ukuziphatha azichazi
Isini kunye nemvume-Inkululeko yokukhetha:
uyayazi umyalelo malunga nokuvuma ngokwesondo
cacisa indlela imvume esebenza ngayo ubudlelwane
uyazi ukuba umntu ngamnye unokhetho kunye nezwi kunye nendlela yokusebenzisa ngayo
Ukuqonda umntu ngamnye unokuxabisa
ukuqonda ukuba ubudlelwane obuhle buvulela ukukhulumisana nokuhlonipha
indlela icandelo loonografi elitshintshile ngayo kunye nomphumo walo kwesi sizukulwana
iindlela zokuthetha nabantwana bakho
nemiphumo yokusetyenziswa ngokunyanzeliswa kweentlophu zoonografi kwimpilo, ukufikelela, ubudlelwane kunye nobugebengu
izicwangciso, ngokubambisana nesikolo, ukunceda abantwana bakwazi ukwakha ukuzinzileyo kwiimpawu ezinobuninzi be-intanethi
IIMALI: Ngeentetho ze-£ 500 kunye neendleko zokuhamba.
Ezinye iinkonzo ezikolweni
I-S2 kunye ne-S4: Ukuthunyelwa kwemiyalezo ye-SMS: imicimbi yezempilo kunye nemithetho
Ufunda njani ingqondo yeselula
Kutheni ukuba ingqondo yengqondo isenokuba yinto engathandabuzekiyo yokugqithisa
Uphando lwezomthetho malunga neentsholongwane ezibhekiselele kumatyala okuthumela nge-post
Udliwano lwamavidiyo kunye nabashushu abaphandle be-porn abaye bafumana
Indlela yokwakha ukuzinza nokuphi na ukufumana uncedo
S5 / 6: Iphonografi Kwiimvavanyo
Iimpembelelo ekufikeleleni nasekuveleni
Iingozi zobunzima bokuziphatha kunye nokungasebenzi kwezesondo
Ukugxeka impembelelo kumzi mveliso wephonografi njengenxalenye 'yoqwalaselo loqoqosho'
24-Ihora Idijithali yeDetesix kwiiseshoni ze-2 c.Xhsum Days days: Umsebenzi uquka yonke intsebenziswano ye-intanethi
Icandelo 1 libandakanya ingxoxo yokuqala malunga nophando "kuyilo olukholisayo", kukoneliseka kwangoko kunye nokuzithiba; iingcebiso zokwenza i-detox
Icandelo 2, ukuxubusha malunga noko bafumene ukuzama i-detox yeeyure ezingama-24 ngeveki engenelelayo
Jonga amabali eendaba malunga ne-digital detoxes / isikrini esidla S4 kwaye S6 abafundi esikolweni sase-Edinburgh.
Ukuqwashiswa ngeeHarms ezingenzeka kwi-intanethi (P7 kuphela):
Ubungqina bamPlastiki: uqonde umsebenzi wengqondo endala kunye entsha (ukufuna nokucinga)
Qaphela indlela ubuchopho buphendula ngayo kwimeko kwaye lufunda imikhwa
Qondisisa indlela i-intanethi yezobugcisa zesini edibanisa ngayo iingcamango zam; Yintoni enokuyenza xa ndibona iividiyo kunye nemifanekiso endikhathazayo
Icandelo 1 liquka ingxoxo yokuqala malunga nokuba i-intanethi ingasenza njani sifune ukuxhuma nabanye size siphange ukulala kwethu; iingcebiso zokwenza i-detox
Ingxoxo yesi-2 malunga noko bafumene ukuzama i-detox yeeyure ezingama-24 ngeveki engenelelayo
Thetha kubazali malunga nobungqina obutshanje malunga nezixhobo ezinobungozi kunye neendlela zokujongana neengxaki. Oku kunceda ukuphula imvula kwiingxoxo ekhaya
Amacandelo, ngokubambisana nesikolo, ukunceda abantwana ukuba bakhe ukuzimisela kwiimpawu ezinobungozi ezinxulumene ne-intanethi ngokukodwa
Ndiyacela zoqhagamshelwano thina ngekoteyishini ebhaliweyo yasimahla. Isiseko soMvuzo sinokubonelela ngezifundo eziyilwe ngokwesiko ukufezekisa iimfuno zakho.
Amaxabiso ayinkululeko ye-VAT yaye iya kubandakanya zonke iindlela zokuhamba ngaphakathi kwebhanti eliphambili laseScotland kunye nezixhobo.